Ukukhusela umsebenzi emva graduation, ukususela ekuqaleni kwexesha ukuqeqesha kufutshane okulungileyo abaqondisi-mthetho. Abafundi kwi-Junior izifundo unako amanqaku kwi-iinkundla Jikelele kwimimandla ephantsi kolawulo lwesixeko — inkundla secretaries. Abafundi baka-yabalawuli izifundo internship kwi-arbitration inkundla, ezahlukeneyo amasebe, notaries and commercial zesixeko. Emva kokuba esi senzo ikholisa kulula ukufumana umsebenzi njenge isemthethweni Unobhala, nabasebenzi uvimba s, amapolisa igosa.
Kunye nezinye professions kubaluleke ngakumbi enzima. Ngoko ke, ngoko nangoko emva graduation babe a notary ayisayi kusebenza. Le indawo unikezelwa ukuba ubani kunye ephakamileyo isemthethweni imfundo, baqeqeshwa kuba ixesha zange ngaphantsi kwesinye ngonyaka, urhulumente notary-ofisi okanye private notary, iphumeze kuncedwe exam kwaye ekubeni a sephepha-mvume ukuba notarial imisebenzi.
Ukuba kuba Prosecutor, kuyimfuneko na omnye unyaka ukusebenza njengoko komncedisi Prosecutor okanye investigator. Emva ukuba kuyenzeka ukuba ufumane i-koosekela-Prosecutor. Kwaye kuphela emva kwexesha elithile ixesha (rhoqo — iminyaka), ebusweni elinolwazi qualities, unako ukubala kwi Prosecutor ke, isitulo.
Kunzima road ukuya isihloko lawyer. Kuya kuthabatha aliqela eminyaka ukusebenza nge-paralegal, okokuba a umntu Ikhomishini. Kwaye earn reputation obukhulu umgangatho u-ifumana zonke iimeko, kusenokwenzeka ukuba kuthabatha iminyaka emininzi.
Yintoni IINDLEKO Iintshukumo. Ngamazwe uphando networks